I-PMC Iqoka Izitudiyo Ze-Vintage Njengomsunguli Wayo WaseThailand Wazo Zonke I-Pro Audio Monitors - I-NAB Show News ngu-Broadcast Beat, Umsakazi Osemthethweni we-NAB Show - I-NAB BONISA I-LIVE
Ikhaya » Izindaba » I-PMC Iqoka Izitudiyo Ze-Vintage Njengomphathi Wayo WaseThailand Wazo Zonke I-Pro Audio Monitors
I-PMC Iqoka Izitudiyo Ze-Vintage Njengomphathi Wayo WaseThailand Wazo Zonke I-Pro Audio Monitors
Izikhulumi ze-PMC zijabule ukumemezela ukuthi i-Vintage Studios iqokwe njengomsabalalisi wayo osemthethweni eThailand, enomthwalo wemfanelo walo lonke uhla lwenkampani lwemikhiqizo yokuqapha yobungcweti.
Itholakala esifundeni saseBang Na saseBangkok, iVintage Studios yasungulwa e2002 ngumndeni wakwaPuengrusme njengesikhungo sokuqopha umculo wokuthengisa, ukuxubanisa nokwenza kahle. Umdlandla womndeni kaPuengrusme ngomculo nokunakwa imininingwane kuvikelwe ikusasa eliqinile leVintage Studios nedumela lokuletha imiphumela ephezulu kakhulu.
Ku-2016 Vintage Studios yengeze intambo entsha yomnsalo wayo ngokusatshalaliswa kwemikhiqizo yeSolid State Logic. Manje isabalalisa izinhlobo ezahlukene zomsindo we-pro ephezulu kufaka phakathi iFurman, iBock Audio ne-Soundelux. Ngaphezu kwalokho inwebile emkhakheni wezemfundo futhi iqhuba imiboniso, izifundo zokuqeqesha kanye nezinhlelo zokufunda emanyuvesi esakhiweni sayo esinezitezi ezintathu ngokuhlangana nabakhiqizi kanye nezikhungo zezemfundo zaseThai.
Isinqumo sokufaka isivumelwano sokusatshalaliswa ne-PMC sasingelula kuVintage Studios. Lesi sikhungo sinabaqaphi be-PMC kuwo wonke amagumbi okulawula amathathu - MB3 XBD-A kanye nama-monotwo6 monitor egumbini lawo elikhulu, ama-twotwo8 monitors esitudiyo sayo sesibili futhi muva nje kwethulwe icwecwe eliseduze komphumela we-compact eduze kwe-point6 esiteshini sesithathu.
Umnikazi weVintage Studios nomsunguli weSudatip Puengrusme uthi: “I-PMC iluhlobo oluhle olunamagugu amahle. Umsindo wabaqaphi bawo ubonga ngokungalingani nobuchwepheshe obuhlukile be-Advanced Transfer Line futhi sonke sijabule ukukwazi ukuletha leli zinga lekhwalithi emakethe yaseThai okokuqala. Wonke umuntu ozwe ama-PMC kuma-studio ethu uhlabeke umxhwele kakhulu. "
ISudatip Puengrusme ingeza ukuthi amamodeli we-PMC egumbini ngalinye ayeakhethwa ukuze ahambisane nama-acoustics nosayizi wendawo ngayinye nokuthi akwazi ukuletha imiphumela emihle ngesikhathi amaklayenti eqopha, exuba noma enza kahle.
“Siyazisebenzisa futhi ngenhloso yokukhombisa ngoba umkhiqizo usemusha kakhulu emakethe yaseThai,” echaza. “Kodwa-ke, sibe nesikhathi esimnandi kakhulu sokwethula kanti abantu baseThailand sebeqalile ukuthenga i-PMC. Ngenyanga edlule, lapho uchwepheshe womkhiqizo we-PMC uChris Allen ekhona, simeme abakhiqizi nabaculi bendawo ukuthi babekhona esifundweni sokulalela futhi wonke umuntu wahlabeka umxhwele kakhulu ngabaqaphi. Abasebenzi bethu nabo bajabule kakhulu nabo. ”
UChris Allen we-PMC uyanezela: “Ukusebenza neVintage Studios kuyinto ehluke kakhulu ngoba ngokuyinhloko bayindawo yokuqopha yezentengiselwano futhi banokuxhumana nabantu abaningi ababalulekile embonini yomculo waseThai. Kithina, lokhu kuyinzuzo enkulu njengoba silungile ekuqaleni kokusungula i-PMC njengophawu eThailand. Siyethemba ukuthi uma abantu bezwa ukuthi mkhulu kangakanani ama-monitor ethu, bazofuna ukuzithenga - futhi nokuba nenkampani efana neVintage Studios njengonxusa lethu kubalulekile empumelelweni yethu yesikhathi esizayo. Ngaphezu kwalokho bagxile kakhulu emkhakheni wezemfundo, obuye uhambisane nemigomo yethu yokuxhasa abaculi nabakhiqizi kusukela ekuqaleni kwemisebenzi yabo yonke le ndlela. ”
IVintage Studios isivele yathatha i-oda yesibili ye-PMC IB1S-A Abaqaphi besinye isikhungo sezentengiso ne-IB2 XBD-A monitors, ezobe ifakwe studio yangasese. Amakhasimende aseThailand afuna ukuzwa umsindo wezingqapheli ze-IB2 XBD azokwazi ukuhambela lesi situdiyo njengoba umnikazi enenjabulo yaso ukuthi isetshenziswe njengesikhungo esengeziwe sedemo.
I-PMC ingumkhiqizi we-loudspeaker wase-UK-based, ohola umhlaba wonke, amathuluzi okukhetha kuzo zonke izinhlelo zokusebenza zokuqapha zezobuchwepheshe ezibucayi, kanye ne-audiophile eqondayo ekhaya, lapho enikeza khona iwindi elibonakalayo ekuhlosweni kwangempela komculi wokurekhoda. Imikhiqizo ye-PMC isebenzisa izinto ezitholakalayo ezihamba phambili kanye nemigomo yokuklama, kuhlanganise nobuchwepheshe be-Advanced Transmission Line (ATL ™) obunikazi benkampani, ukukhishwa kwe-edge-edge kanye nezindlela eziphambili ze-DSP ukwenza ama-loudspeakers anikeze umsindo nomculo njengoba kwakunjalo uma kuqala wadala , ngesinqumo esiphezulu kakhulu, futhi ngaphandle kwembala noma ukuphazamiseka. Ukuze uthole olunye ulwazi kumakhasimende ethu nemikhiqizo, bheka www.pmc-speaker.com.
Izindawo ze-Cloudbass Axon Technology Esezinhlizweni Zokusebenza Kwayo Zokuqala, Ngokugcwele UHD IP HDR Ngaphandle kweloli Lokusakaza - Disemba 12, 2019
I-Cobalt Encoder Ukusabalalisa MB2 XBD-A Abameli be-PMC umphumela6 Thailand twotwo6 twotwo8 Izitudiyo zeVintage	2019-11-08
Ngaphambilini: I-NewTek TriCaster® Mini Brings UHD Digital Media Production kanye Ukusakazwa Ezikoleni, Amabhizinisi, kanye ne-Professional AV
Olandelayo: Ukunikezwa kwe-NUGEN Okungavunyelwe kwe-Audio Post plug-Ins Yomculo neTelevishini Projects
INDLELA Yokusakaza YAMANYE ne-IT Support engineer